यसरी हुन्छ कतारमा नेपाली तरकारीको निर्यात, दुवई पठाउने तयारी (भिडियोसहित) - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > यसरी हुन्छ कतारमा नेपाली तरकारीको निर्यात, दुवई पठाउने तयारी (भिडियोसहित)
July 14, 2019 July 14, 2019 GRISHI526
काठमाडौं । एग्रिकल्चर नेपालले सन् २०१७देखि नेपाली तरकारी विदेशमा निर्यात गर्ने विषयमा बजार अध्ययन गरेको थियो । एग्रिकल्चर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली तरकारीको माग र खपतको विषयमा सुरुवातको दिनमा कतारलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।
संस्थाका प्रवन्ध निर्देशक हरि ढकालले नागरिक खबरसँगको संवादमा कतारमा नेपालको तरकारीको माग उल्लेख्य रहेको बताए । ‘विदेशको सुपरमार्केटहरुमा विभिन्न देशको तरकारी र फलफूल देखिन्छ । तर नेपालको तरकारी देखिदैन,’उनले भने ।
‘अहिले १० देखि २० टनसम्म नेपाली तरकारी कतारमा माग छ । हाम्रोमा उत्पादन नै छैन । कतारबाट एक टन हरियो खुर्सानीको माग आयो । कृषि फर्महरु खोज्दै जाने हो भने १० देखि २० किलोसम्म पाइन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा उत्पादन नै छैन । उत्पादन नभएपछि हामीले माग अनुसारको काम गर्न सकेका छैनौँ।’
एग्रिकल्चर नेपालको वस्तु निर्यात र आयात गर्ने आफ्नै टिम छ । काम गर्दा कानूनी झन्झट नभए पनि व्यवहारिक पक्षमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।
कम्पनीले तिते करेला, सिमी, हरियो खुर्सानी, घ्यू सिमी, फर्सी, गुन्द्रक लगाएतका तरकारी निर्यात गर्दै आएको छ । यस्तै विभिन्न सिजन अनुसारको फलफूल समेत निर्यात गर्दै आएको छ । अहिलेका लागि आँप र भुइकटर निर्यात गर्दै आएको कम्पनीका निर्देशक ढकालको भनाई छ ।
तरकारीको बजार व्यवस्थापनमा समस्या
नेपालमा अग्र्यानिक तरकारी गाउँ गाउँमा उत्पादन हुन्छ । तर, यसको बजार व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन् । बजारसम्म आइपुग्नका लागि आम्दानीभन्दा खर्च बढि हुने अवस्था छ ।
यसलाई व्यवस्थित गर्न र अग्र्यानिक नेपाली तरकारी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनका लागि एग्रिकल्चर नेपाल सञ्चालनमा ल्याएको ढकालले बताए । उनले भने, किसानसँग समन्वय गर्न चाहान्छौं । यसका लागि सरकारले त्यो वातावरण तयार गरीदिए किसानको पसिनाको सम्मान हुने थियो ।
नेपालमा प्रसिद्ध सिन्धुलीको जुनारलाई आन्तरिक बजारमा मात्रै होइन । यसको बजार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कम्पनीको योजना छ । ‘हामीसँग ठाउँ विशेषको तरकारी र फलफूल छ । यसलाई प्रवद्र्धनकै अभाव छ । प्रचार प्रसारको अभाव छ । यदि त्यो स्वादिलो जुनार । अनि, रसिलो सुन्तला खाडि मुलुकमा मात्रै पुर्याउने हो भने किसानले सहि मूल्य पाउने छन् । यो अभियानमा एग्रिकल्चर नेपाल लागेको छ।’ उनले बताए ।
अबको बजार दुवई
एग्रिकल्चर नेपालले अब कतारपछि दुवईमा आफ्नो बजार अध्ययन गरीरहेको छ । कतारमा विभिन्न सुपरमार्केटसँग संस्थागत रुपमा समन्वय गर्ने योजना छ भने दुवईमा प्रारम्भिक बजार अध्ययन भइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली तरकारी पुर्याउनका लागि सुपरमार्केटहरुसँग सम्झौताको प्रक्रियामा लागेको ढकालले जानकारी दिए । यस विषयमा नेपाल सरकारसँग समन्वय भैरहेको छ ।
एग्रिकल्चर नेपालले विभिन्न ठाउँबाट तरकारी संकलन गरेर जम्मा गरेको हुन्छ । तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीले कतार जाने सामान हो भनेर प्राथमिकता दिदैनन् । लोड गर्ने क्रममा पनि अन्य समान जस्तै फालिदिने हुँदा कतिपय प्याकिङहरुमा समस्या देखिएको छ ।
एयरपोर्ट संवेदनशील क्षेत्र हो । यहाँको स्टोर रुम उस्तै छ । चुस्त व्यवस्थापन हुँन नसक्दा धेरै समस्या देखिन्छ ।
विमान कम्पनीसँगको सम्झौता
कम्पनीले विभिन्न एयरलायन्ससँग तरकारी निर्यातका लागि सम्झौता गर्नु पर्छ । जस्ले कति समय र कति टनका लागि भन्ने हुन्छ । यस कारण पनि नेपाली तरकारी सम्बन्धित गन्तव्यमा सहजै पुर्याउन सकिन्छ । हवाई माध्यमबाट सामान निर्यात गर्नु पर्ने भएका कारण हवाई कम्पनीसँग संस्थागत समन्वय गर्नु पर्छ ।
नेपाल सरकारले किसानलाई र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । ‘कृषिमा अनुदान दिएपछि यस्को प्रतिफल हेरौं । कहाँ के भइरहेको छ ? उत्पादन कस्तो भयो ? यो मुख्य विषय हो ।’ ढकालले बताए ।
‘कृषि प्रधान देश मात्रै नभनौं । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने वातावरण तयार गरौं । किन, भारतको चामल र तरकारी नेपालमा आयत गर्ने ? कहिलेसम्म यस्तो भइरहन्छ ? यसकारण हामीले खाली जग्गामा किसानलाई खेति गर्नेगरी परियोजना चलाऔं । तरकारी र फलफूल मात्रैको अवधारण अगाडि बढाऔं । यस्ले सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ ।’ ढकालको तर्क छ ।
नेपालले जित्यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय टीट्वेन्टी शृंखला